Mee Omume Na Onlinentanetị Tupu Playgba Egwuregwu Brick na Mortar Casinos - jluis37.com
Ihe jiri nwayọ na-alaghachi na ọrịa COVID na-ebelata ngwa ngwa yana ịgba ọgwụ mgbochi na-apụtawanye nke ọma. Na ihe ịlaghachi na nkịtị, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem gaa na cha cha brick na mortar chashọn na nka gị site na iji otu n’ime ụlọ ịgba chaa chaa na USA na-atụ aro nke ọma. Casinoslọ ahịa ndị na-ere ahịa anyị dị ndụ dị ka ụlọ ịgba brik na ụlọ ị ga-eleta, naanị ị na-egwu ha n’ịntanetị site na nkasi obi nke ụlọ.
Gbalịa igwu egwu blackjack, roulette, baccarat, super 6 na cha cha Holdem na ezigbo onye na-ere ahịa na-enweghị mgbakwụnye nke ịnọdụ ala na tebụl na ndị egwuregwu ndị ọzọ. Ọ bụ nnukwu ụzọ iji mezuo nka gị ka ị wee gaa cha cha brik na ngwa agha ị maara iwu niile na ihe ị ga-atụ anya ya. Jiri cha cha cha cha USA wee na-egwuri egwu na cha cha brik na ngwa agha ma jikọtara ya na ntanetị na ntanetị. Ọ dịghị ụzọ ka mma iji mụọ obere na / ma ọ bụ nwalee ụfọdụ usoro ịkụ nzọ ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ igwu egwu na-ere ahịa ndụ blackjack lelee anyị Blackjack Strategy Chart nke bụ ngwa ngwa na-egosi mgbe ị ga-eti, guzoro, kewaa ma ọ bụ okpukpu abụọ dabere na kaadị gị na ndị na-ere ahịa kaadị. A na-ebipụta eserese a ka ị nwee ike iburu ya mgbe ị na-anọdụ ala na tebụl na cha cha cha cha na brick.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem gaa cha cha ọdịnala, ma ọ bụ naanị chọọ ahụmịhe cha cha ọdịnala, lelee nke ọ bụla n’ime USA casinos na-ebi ndụ n’ịntanetị ma kpọọ onye na-ere ahịa na-ebi ndụ, onye na-ere ahịa na-ebi ndụ, onye na-ere ahịa na cha cha, onye na-ere ahịa na roulette na / ma ọ bụ onye na-ere ahịa na-ebi ndụ 6 ma nwee obi ụtọ na ezigbo onye na-ere ahịa ezigbo ego. Ahụmịhe ahụ dị ka igwu egwu na cha cha cha cha na cha cha cha cha na ụzọ dị mma iji kpochapụ nkà gị ma nwee omume tupu ịga Las Vegas, Atlantic City ma ọ bụ ụlọ ịgba chaa chaa ndị ọzọ na brick.
Ọzọkwa nke mara, anyị na-anya isi nke ukwuu na-atụ aro ndị kasị mma USA ndụ online casinos. Anyị na-atụ aro USA ndị na-ere ahịa n’ịntanetị dị n’ịntanetị ihe karịrị afọ 5 ebe a na Live Casino USA ma na-egwuri egwu na casinos n’ịntanetị ruo ọtụtụ iri afọ. Anyị maara ihe anyị ga-achọ na cha cha cha cha tụkwasịrị obi na nke a pụrụ ịtụkwasị obi na igwu egwu na cha cha cha cha cha cha niile anyị na-akwado ebe a na weebụsaịtị anyị. Enweghị ezigbo obi ike karịa ka anyị onwe anyị na-egwu ezigbo ego na casinos anyị kwadoro.
Ya mere, nwee obi ụtọ ma nwee olileanya na ị ga-eji ọmarịcha mmeri merie mgbe ị gụsịrị egwuregwu cha cha nke ị họọrọ. Abịala m Atlantic City kemgbe ọrịa ahụ malitere, m ga-asị na ha na-arụ nnukwu ọrụ idebe ebe dị ọcha na idebe igwe mmadụ n’ọnụ mmiri. Emechara m onwe m ọgwụ mgbochi ka ike gwụ m ijide Corona Virus ma rịọ onye ọ bụla na-agbanyeghị ọgwụ mgbochi yana nwee ike ịme ọgwụ mgbochi. Ọ bụ n’ezie ụzọ dị mma iji belata nrụgide na nke kachasị mma, ị nwere ike ịfefe nje ahụ na ndị ị hụrụ n’anya nwere ike ịnwe nsogbu.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara egwuregwu cha cha nke enyere ndị na-ere ahịa ndụ, lee peeji nke ndị na-ere ahịa na-ebi ndụ ma chọta ụlọ kacha mma USA na-ebi ndụ maka igwu egwuregwu ọ bụla yana ụfọdụ ihe atụ na ịgba nzọ dị. Maka ozi ndị ọzọ gbasara Corona Virus na ịgba ọgwụ mgbochi, lee onye na-ahụ maka nlekọta ahụike ma ọ bụ hụ ihu ụlọ CDC wee nweta eziokwu.